Tiigso – SOOMAALIYEEY DAD AAN WAX OGEYNI YAY KU HODIN EE MIDOOW OO DIFAACO DALKAAGA
Soomaalidu waa dad wanaagsan ilaahayna wuxuu siiyey oo ku abuuray dal uu u dooray waana inay ku mahadiyaan. Waxaase la wada ogyahay in dalkaas wanaagsani leeyahay cadow. Cid an Soomaali ahayn oo difaacaysaana, haddii lagu soo duulo ama laga shaqaynayo sidii loola wareegi lahaa.
Midda kale, adduunka waxaa inakula nool ummado badan oo muslimiin ah, kuwaasoo ay qolo waliba dhulkeeda ka ilaashato cid kasta oo kale oo u dhalatay ama ka timid dal kale, waana la wada ogyahay arrintaas. Nasiibdarro, waxaad arkaysaa ama maqlaysaa Soomaali xoogaa ka bartay diinta Islaamka iyo luqada Carabiga oo la dagaallamaya in Soomaalidu noqoto dowlad iyo inay dadkeedu noqdaan waddaniyiin ilaashada dalkooda. Dadkii dal fiican leh sideenna oo´an waddaniyiin ahaynna waa la hubaa in marka dambe laga qaadayo oo lagala wareegayo.
Adduunkii waa isu soo dhowaadey hadda dalkeennuna waa qaali oo cadow badan buu leeyahay ee an u midoowno difaaciisa iyo ilaalintiisa. An iska ilaalinno dowlad-diid, waddaniyad-diid iyo kuwa iyagoo an wax ogeyn ama dan gaar ah leh yiraahda – dhulka lama kala laha. Muu aado isagu dhulka an la kala lahayn, hadduu run sheegayo? Muxuuse ugu doodi waayey oo wax ugu qaban waayey dadka maalin walba laga soo tarxiilayo dalalka Islaamka iyo dunida oo dhan?
TAGS » featured, tiigso
POSTED IN » Bulsho & Barbaarin